Mihemotra Ny Fahalalahan’ny Aterineto Ao Rosia, Ao Okraina, Mihatsara Kosa Ao Belarosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2016 7:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, Español, English
Ny fihemoran-daharan’ i Rosia dia vokatry ny fampidirana lalàna vaovao mametra ny zon'ny mpiserasera aterineto, anisan'izany ny fonosana lalàna fantatra amin'ny hoe “Lalàna Yarovaya,” izay mamaritra ny fahalalahan'ny aterineto mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana. Ny lalàna Yarovaya dia mitaky amin'ireo mpikirakira ny fifandraisan-davitra mba hanome varavarana ambadika fidirana ho an'ny manampahefana ary mampiditra famerana amin'ny hetsika ara-pivavahana an'ireo finoana sasany. Amin'ny fampitomboana ny sazy ambony indrindra noho ny «fanamarinana» ny fampihorohoroana antserasera, nametraka hetsika ara-dalàna mahery setra kokoa manohitra ireo mpiserasera media sosialy ny lalàna. Nanamarika ihany koa ny Tranon'ny Fahalalahana fa iharan'ny fanafihana antserasera sy ny herisetra ara-batana hatrany ireo mpikatroka antserasera.
Misy ifandraisany amin'ny hetsika manodidina ny Ady ao Donbas ny fihemoran'i Okraina tamin'ny filaharana amin'ny Fahalalahan'ny aterineto. Tahaka ny ao Rosia, nanao famoretana tamin'ireo fanehoan-kevitra “mahery fihetsika” antserasera, izay matetika mifandray amin'ny tsikera momba ny anjara asan'i Kiev amin'ny ady na manohana ny separatista tohanan'ny Rosiana ao atsinanana ny manampahefana Okraniana. Nirotsaka tamin'ny ezaka mifamaly amin'izany ny manampahefana ao amin'ny repoblika separatista Donetsk sy Luhansk ao atsinanan'i Okraina, amin'ny fikasana hanakana ireo votoaty mifandraika amin'ny kolontsaina Okrainiana na manohana ny ezak'i Kiev amin'ny ady.
Notarihan'ireo mpiantsehatra tsy ara-panjakana ny ezaka sasany: tany am-piandohan'ity taona ity, namoaka ny mombamomba manokana an'ireo mpanao gazety an'arivony mitatitra ny ady ao atsinanana ireo nasionalista Okrainiana.
Tantaran'ny Belarosia farany
Polonina 16 Novambra 2021
Fahalalahàna miteny 09 Novambra 2021